Igwe igwe npịpị ọkụ anyị nwere ọtụtụ ihe nwere ụdịdị dị iche iche na nkọwa zuru oke, nke nwere ike gboo mkpa ndị ọrụ dị iche iche. Igwe gluing igwe na -ekpo ọkụ: akwa 6, akwa 8, akwa 10. Oghere dị n'obosara bụ 110 mm.
A na-eji ya maka njikọ na-ekpo ọkụ nke ọnụ ụzọ mgbochi / izu ọkụ, ma nwee ike họrọ ọkwa 6, 8, 10 na 12.
Ndenye → idobe → ịpị → ide
Igwe ncha Ala 10
N'ozuzu akụkụ nke isi engine 2900*1400*2810mm
Ịpị nha efere 45*1100*2200mm
Ndokwa akwa 110mm nhọrọ
Thermal conduction meson Mmiri ọkụ, uzuoku, mmanụ mbufe ọkụ
Mbido 2 mmanụ cylinders
Igwe a na-ekpo ọkụ na igwe na-ejikọ ọnụ nke ukwuu na-eji cylinders mmanụ na-eguzogide okpomoku dị elu, oche na-ebu ígwè, ogwe ihe eji arụ ọrụ, efere akwụkwọ akụkọ eji ebipụta ọkụ, ụzọ ntuziaka nchara, na ihe ọ bụla na-ebipụta efere ọkụ nwere ihe nkedo. na ịdọ aka ná ntị iji dozie nsogbu ahụ. Nsogbu nke ịwepụ nke efere ịpị ọkụ, efere ịpị nwere ike ịdị elu na ala n'oge usoro ịpị, ọ dịghịkwa mfe ịkwaga. A na-ejikarị igwe mgbochi gluu igwe na-eme ọtụtụ ihe mkpuchi maka ngwa pụrụ iche maka akwụkwọ ụzọ gluing dị ka ụzọ mgbochi ohi, ọnụ ụzọ ọkụ, ọnụ ụzọ osisi, ụzọ ime, na ọnụ ụzọ nchara.
Nke gara aga: Pịkụl jikọtara ọnụ
Osote: Igwe na -ekpuchi windo na -enweghị ọkụ
Igwe na -agba ọkụ na -ekpo ọkụ
Fire window etiti igwe